musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Inopenya pa28th World Travel Awards
Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • Seychelles Kuputsa Nhau • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Seychelles inopenya paWorld Travel Awards
Inozivikanwa nekunaka kwayo kwechisikigo uye kukwezva kweumbozha panyika, gungwa uye mumhepo, zvitsuwa zveSeychelles zvakatsvaira huwandu hunokatyamadza hwemibairo pa28th Edition yeWorld Travel Awards.
Seychelles yakatungamira muzvikamu zvakati wandei pamaWorld Travel Awards epagore.
Nzvimbo yekuenda inoichengetedza seInotungamira Sustainable Tourism Destination muIndia Ocean kwegore rechitatu rakateedzana.
Yakapawo mubairo weIndia Ocean's Leading Honeymoon Destination 2021 seyekupedzisira kudanana.
Iyo pristine paradhiso inochengeta korona yayo seIndian Ocean's Leading Sustainable Tourism Destination 2021 kwegore rechitatu rakateedzana nekuedza kwayo mukusimudzira maitiro akasimba uye kudzikisira kukanganisa kweindasitiri.
Kuisa chisimbiso chayo seyekupedzisira rudo gettaway, Seychelles inopenya seIndia Ocean's Leading Honeymoon Destination 2021. Nzvimbo yekurota yehuchi, ine mabhichi ayo akatanhamara uye zvitsuwa zvakasvibira, chitsuwa ichi chakavhurazve miganhu yayo kune yekushanya muzvikamu kubva muhafu yekupedzisira ya2020, nekuvhurwa kuzere kwevashanyi munaKurume 2021 XNUMX.
Nzvimbo yakakurumbira yekufamba nechikepe, ine zviuru zvitsuwa zvekushanya, Seychelles inotonga masaisai, tichitora rwendo rwemudunhu reIndian Ocean's Leading Cruise Destination 2021 zita apo Port Victoria yakanzi Indian Ocean's Leading Cruise Port 2021. Zvikepe zvidiki zvichange zvave kujairika zvinofamba mumvura dzedu kubva muna Mbudzi, sezvitsuwa, izvo zvakadaidza kuti kumisa nguva isati yakwana. mwaka wayo wekufamba muna Kurume 2020 nekutanga kweCCIDID-19, inovhura nzvimbo yayo yegungwa uye zviteshi kune zvikepe zvidiki.
Seychelles 'mabhizinesi ekushanya ari kuita zvakanakisa akapihwa kucherechedzwa kune avo emhando zvigadzirwa nemasevhisi. Seychelles Kufamba kwakawana zita redunhu reLeading Tour Operator 2021.
Uye mudenga, tichipenya pamibairo iyi, kambani yenyika yekwaienda, Air Seychelles, yakatakura zita reIndian Ocean's Leading Airline iro rinoshuvira gore rechipiri richimhanya, pamwe nemubairo weIndian Ocean's Leading Airline Lounge kekutanga. Ndege yakahwinawo mibairo yeIndia Ocean's Leading Airline - Bhizinesi Kirasi 2021 uye Indian Ocean's Leading Cabin Crew 2021.
Vachitaura nezvemibayiro iyi, Mutungamiriri Mukuru weDestination Planning and Development, Paul Lebon, akati, “Sevachengeti venzvimbo iyi, tose tinofanira kudada kuti Seychelles yave ichizivikanwa pasi rose uye yawana mibairo. Mibairo iyi mucherechedzo wekushanda nesimba uye kuzvipira kuita zvemhando yepamusoro kunyangwe zvimhingamipinyi zvatakatarisana nazvo isu seindasitiri. Tinoda kutora mukana uno kukorokotedza vose vakakunda pamwe nevakasarudzwa. Tinotenda kuedza kwavo nekudyara uye tinovimba kuti zvinobatsira kukurudzira masangano mazhinji uye mabhizinesi ane chekuita nekushanya nevashandi vavo mukuunza zvigadzirwa nemasevhisi. "
Padanho renyika, 7° Maodzanyemba anomira pachena seSeychelles 'Leading Tour Operator 2021 uye Creole Travel Services inotora mubairo weSeychelles' Leading Destination Management Company. Satguru Travel inotora mubairo weSeychelles Leading Travel Agency 2021 uye Avis zita reSeychelles 'Leading Car Rental Company 2021.
Pakati pezvitsuwa zvekushanyirwa kwezvitsuwa zvakachengeta mubairo wekuhwina mubairo padanho renyika, Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa seLeading Boutique Hotel, Constance Ephélia seLeading Family Resort uku STORY Seychelles inochengeta zita rayo seLeading Green Resort, ichiwana kuzivikanwa kwekuedza kwayo. . Zvakare, iyo Three-Bedroom Beach Suite paFour Seasons Resort Seychelles yakatora zita reLeading Hotel Suite 2021, nepo Four Seasons Resort Seychelles paDesroches Island yakachengetedza chinzvimbo chayo seLeading Luxury Resort. JA Enchanted Island Resort inoramba ichiita zvakanakisa muchikamu cheLeading Resort.
Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare yakaonekwa seSeychelles 'Leading Conference Hotel nepo Leading Luxury Hotel Villa yakatorwa nePresident Villa kuConstance Lémuria.
Iyo World Travel Awards chirongwa chepagore chinopa rukudzo kune vanonyanya kuita zvepasirese uye redunhu kushanya uye indasitiri yekufambisa, nekupawo mibairo padanho renyika.